Isexwayiso: Ukusetshenziswa kwe-AFF_LINK engacacisiwe engaguquki - kucatshangwa ukuthi 'AFF_LINK' (lokhu kuzophonsa Iphutha enguqulweni yesikhathi esizayo ye-PHP) /media/soydemac.com/website/wp-content/plugins/abn-appstore/definitions.php on line 22
Ungayisebenzisa kanjani i-iPhone yakho noma i-iPad njengekhibhodi ye-Mac yakho | Ngivela kwa-mac
'Isilawuli Samagundane Eselula' uhlelo lokusebenza oluhle eliguqula idivayisi yakho ye-iOS ibe isesekeli esinamandla se-Mac yakho noma i-PC. Iselula Remote Remote ingasetshenziswa njengegundane noma i-trackpad kwikhompyutha yakho, futhi ungasebenzisa uhlelo lokusebenza njenge isilawuli kude Okweqembu lakho, kepha futhi kunokusebenza okuningi nge ikhibhodi eyakhelwe ngaphakathi kuyo ukuze ukwazi ukusebenzisa isoftware ethile kwi-Mac yakho. Kulokhu okuthunyelwe, sizokukhombisa ukuthi ungalusebenzisa kanjani lolu hlelo lokusebenza ukuthayipha noma ukwenza imiyalo yekhibhodi ku-Mac yakho noma kwi-PC, ngqo kusuka ku-iPhone yakho noma i-iPad.
1 Usebenzisa i-iPhone yakho noma i-iPad njengekhibhodi kukhompyutha yakho
2 Ikhibhodi ye-QWERTY
3 Imisebenzi yekhibhodi
4 Ikhiphedi yezinombolo
5 Usebenzisa iMouse yesilawuli kude
Usebenzisa i-iPhone yakho noma i-iPad njengekhibhodi kukhompyutha yakho
Ukusebenzisa idivayisi ye-iOS njengekhibhodi ku-Mac yakho noma i-PC kungasiza kakhulu. Abanye ukusebenza engingacabanga ukusebenzisa lolu hlelo kungaba:
Lapho wethula umsebenzi othile esikrinini noma kumaphrojektha.
Lapho ubuka amavidiyo asuka kukhompyutha yakho ngethelevishini yakho.
Lapho ufuna ikhiphedi yezinombolo.
Lapho ikhibhodi ingakusebenzeli.
Njengoba ukwazi ukubona esithombeni esingezansi, i-Mobile Mouse ine- ikhibhodi eyisisekelo ye-QWERTY, kodwa futhi kufaka phakathi i- ikhiphedi ehlanganisiwe yezinombolo, nekhibhodi eyenziwe ngokukhethekile okhiye bekhibhodi izinqamuleli nezinkinobho zomcibisholo.
Amakhibhodi axhumeka phakathi nezinkinobho nge ngenhla kokhiye be-U, I, O no-P (Bheka isithombe ngezansi nje). Ngaphezu kwalokho, ikhiphedi yezinombolo ifaka phakathi kopisha, usike bese unamathisela izinketho, ezosiza kakhulu ezimeni ezahlukahlukene.
Ikhibhodi QWERTY Okwakhelwe ngaphakathi kuza nazo zonke izinkinobho ezifanayo ongazilindela kukhibhodi ye-iOS, kepha kufaka phakathi okumbalwa ukulawula iMac yakho ikhibhodi yakho ye-iOS engayenzi. Lokhu kufaka phakathi umyalo nokulawula, phakathi kokunye ukusebenza.
Ikhibhodi ibuye ifake i- F1 kuye ku-F12, kanye Ukhiye we-Escape, Delete, Home ne-End. I okhiye bemicibisholo abane abanemikhombandlela eminingikanye phezulu nangaphansi kufakiwe ukuze kube lula kuwe.
Njengekhibhodi ye-QWERTY, uzokwazi nokufinyelela kufayela le- lawula okhiye bokuyalakanye a inkinobho yokhiye. Lokhu kuyasiza uma wenza imiyalo yekhibhodi ku- cela umsebenzi othile ku-Mac yakho.
I-Mobile Mouse Remote Numeric Keypad iyisici esisebenzisekayo esivumela ukuthi ube ne-Numeric Keypad ku-Mac yakho. Lesi isici i-Apple esisuse embonini yamakhompiyutha eselula, futhi inikela kuphela kumakhompyutha wayo wedeskithophu, kepha manje ngalolu hlelo lokusebenza, ungaba lula ngefayela le- ikhiphedi yezinombolo, ngisho naku-MacBook, MacBook Air noma i-MacBook Pro izinqamuleli eziwusizo zokukopisha, ukusika, nokunamathisela umbhalokanye gcina amafayela futhi wakhe amafayela amasha kuzinhlelo zokusebenza ezisekelwayo.
Usebenzisa iMouse yesilawuli kude
Imouse Yeselula sebenzisa i-Wi-Fi yakho yasekhaya ukuxhuma idivayisi ye-iOS kwi-Mac noma i-PC, kodwa ngokuthengwa ngaphakathi nohlelo, ingaxhunyaniswa ngezinye izindlela zokuxhuma esikhundleni, njenge I-Bluetooth, Peer-to-Peer, nokuxhumeka kwe-USB.
Kunoma ikuphi, kufanele landa uhlelo lwe-Server Imouse Yeselula ku-Mac yakho noma kwi-PC, ungakwenza ngokuchofoza kulokhu isixhumanisi, ukusebenzisa i-iPhone yakho, i-iPod Touch noma i-iPad ngekhompyutha yakho. Ingabe i- khulula umculo, kepha khumbula ukuthi uhlelo lokusebenza lwesilawuli kude lweMouse uqobo kumele luthengwe ku-App Store, futhi lubize u- € 1,99.
Ukusebenzisa idivayisi yakho ye-iOS njengekhibhodi ku-Mac yakho noma i-PC akukaze kube lula. Kunezinhlelo eziningi zokusebenzisa ikhibhodi ukude ku-App Store, kepha lolu hlelo lokusebenza olubiza kuphela i-1,99 € Ingabe inketho engcono kakhulu, nokubuyekezwa kuyakusekela.
Imininingwane ye 'Mobile Mouse Remote':
Kubuyekezwe: 06 / 01 / 2016
Iwashi le-Apple: Yebo
Unjiniyela: I-RPA Tech, INC.
Ukuhambisana: Idinga i-iOS 6.1 noma kamuva. Iyahambisana ne-iPhone, i-iPad ne-iPod touch.
Thenga uhlelo lokusebenza 'Isilawuli Samagundane Eselula' ngqo kusuka ku- App Store, ngokuchofoza kusixhumanisi esilandelayo.
Iselula Remote Remote1,99 €
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Amakhompyutha we-Mac » Ungayisebenzisa kanjani i-iPhone yakho noma i-iPad njengekhibhodi ye-Mac yakho
Izithombe-skrini Zithathe mahhala isikhathi esilinganiselwe